8 Martsa: Nifarana tany Madrid ny Martsa - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » 8 martsa: Nifarana tany Madrid ny volana martsa
8 MARTSA: AN-TOKONY NY TONTOLO 2ND AN-TOKONY NY FIVORIANA SY NY FIVORIANA IZANY
Taorian'ny 159 andro nitsangatsangana ilay planeta niaraka tamin'ny hetsika tany amin'ny firenena 51 sy tanàna 122, nitsambikina fahasarotana sy tranga maro, ny Team Team an'ny 2ª Martsa Manerantany Namarana ny fitsidihana nataony tany Madrid izy tamin'ny 8 martsa, daty voafidy ho mari-boninahitra sy fampisehoana ny fanampiana ny tolona vehivavy. Nankalazaina isan-karazany ny fahatongavany tamin'ny 7 sy 8 martsa.
Asabotsy 7 martsa: avy any Vallecas mankany Retiro
Nony maraina Ivontoerana kolontsaina del Pozo ao amin'ny faritra Vallecas, a fampisehoana an-kambana eo anelanelan'ny Sekoly Núñez de Arenas, ny orkestra Pequeñas Huellas (Turin) sy ny Manises Cultural Athenaeum (Valencia); Zazalahy sy zazavavy zato lahy nanao mozika mozika isan-karazany, ary hira vitsivitsy momba ny rap.
Talohan'ny ampahibemaso natolotry ny fianakaviana sy ny namana ary miaraka amin'ny sarin'ny sarin'andriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana, i Rafael de la Rubia dia nahatsiaro fa ny marika olombelona voalohany dia natao tany amin'ny sekoly Núñez de Arenas. ny kambana dia nipoitra tamin'ny fiomanana amin'ny World World; Naneho ny heviny izy fa tao amin'ny toerana maro izy dia nahita ankizilahy nampiasa rap ho toy ny endrika fanehoana mozika mba hifandraisana amin'ny tanora. Avy eo, dia namporisihany ireo olon-dehibe mba hanomezana lanja ireo tanora izay maneho ny làlana miaraka amin'ireo soatoavina vaovao, toy ny fikarakarana ny tontolo iainana sy ny firaisan-kina.
Ny tolakandro dia nanomboka tamin'ny Arofanina Arab House akaikin'ny Valan'i Retiro. Afaka nifampidinika tao amin'ny efitrano fidirana ny fitaovana isan-karazany natolotra ho an'ny ekipa fototra mandritra ny volana martsa, toy ny kitapo boky miaraka amin'ny sarin'ireo tanora mpifindra monina tonga any Roma avy any amin'ny firenena samihafa any Afrika, miampita ny Ranomasina Mediterane.
Taorian'ny teny vitsivitsy noho ny fisaorana an'i Casa Árabe, dia nandray tsara ireo nanatrika teo i Martina S., ny sasany avy any India (Deepak V.), Colombia (Cecilia U.), Chili (Lílian A.), France (Chaya M ary Denis M.) Italia (Alessandro C., Diego M. sy Monica B.), Alemana (Sandro C.), miaraka amin'ny namana tsy afaka noho ny visa na ny olana ara-pahasalamana manaraka ny fivoriana tamin'ny alàlan'ny streaming . Rafael de la Rubia no nanao famerenana voalohany momba ny nivoahan'ny MM faha-2 sy ny fisehony momba ny voalohany ary nahatsiaro ireo famaky azy io.
Taorian'izay dia nanolotra fitantarana ireo zava-niseho lehibe indrindra nitranga nandritra ny sy manodidina ny diabe ireo solontenan'ireo firenena avy amin'ny kaontinanta dimy. Ny zava-drehetra dia nofenoina fanehoan-kevitra, anekdota, sary namboarina ary nampidirany hafatra avy amin'ny firenena maro samihafa, ka nampisy hetsika maro samihafa izay nataon'ny mpikatroka ary vondrona maro sy andrim-panjakana tsy tambo isaina.
Farany, nisy ireo hetsika sy tetikasa sasany voatonona, izay samy manana ny mari-pahaizana isan-karazany, dia nipoitra tamin'ny dia:
Fifampiresahana eo anelanelan'ny foibe fampianarana. Kolejy sy oniversite.
Fanontana boky tamin'ny volana martsa: a) Boky maneho ny tranon'ny famoahana Saure miaraka amin'ireo sakan-dàlana an'ny MM; b) Bokin'ny MM faha-2, manangona izay efa natao sy c) Lalao amin'ny Goose of the MM
Fanambarana momba ny fahalianana monisipaly na mahaliana ara-kolontsaina amin'ny MM amin'ny ambaratonga monisipaly sy faritra.
fampielezan-kevitra "Mediterane, Ranomasin'ny fandriam-pahalemana" manambara tanàna toa Solon'ny fandriam-pahalemana. Hetsika manaraka eo amin'ny Ranomasina Adriatic.
Senegal (Thiès): Forum "Afrika mankamin'ny tsy fandeferana"
Diabe amerikanina latina ho an'ny tsy fanoloran-tena2021 tany San José, Costa Rica, izay lalana roa no hifindra avy any avaratra sy atsimon'ny kaontinanta.
Fihaonambe "Vehivavy mirehareha ” in Argentina (Tucumán)
fampielezan-kevitra "Andao hampahomby ny fandriampahalemana ”Any Nepal / India / Pakistan
Fitsabahana amin'ny fihaonana an-tampon'ny Loka Nobel Fandriampahalemana (Fihaonambe Vidy Nobel ho an'ny Fandriampahalemanaany Korea Atsimo (Seoul).
Fandraisana anjara amin'ny federasiona momba ny famonoan-kery niokleary Biraon'ny Peace International ary mety hihaona amin'i Guterres, Sekretera jeneralin'ny ONU any Etazonia. (New-York)
Soso-kevitra momba ny festival hankalazana ny fankatoavana ny TPAN any Japon (Hiroshima).
Mpanaramaso noho ny tsy fandriampahalemana any Curitiba sy komity maharitra ho an'ny tsy fisian'ny ady ... any Brezila.
Nakatona niaraka tamin'ny tady ny toe-javatra tontolo iainana ny hetsika, nanasa ny olona rehetra ho mora tohina sy ho voaloto amin'ny otrikaretina tsy fahatomombanana.
Alahady 8 martsa: Puerta del Sol, Km.0 ary mariky ny olombelona
Nanomboka tamin'ny 11:00 maraina dia nisy balaonina hafahafa nitranga ao Puerta del Sol manoloana ny Km.0 manintona ny sain'ny mpandalo. Ny ekipa mpanatanteraka Madrid miaraka amin'ny namana vitsivitsy, tonga ny andro talohan'izay avy tany Brussels sy Tangier, dia nanangana ny sora-baventy tsy misy tohiny ary ny marika tsy fahatongavana kosa no mivoaka an-kianja. Nisy faribolana iray noforonina izay nanombohan'ny olona liana. Marian, avy amin'ny "Vehivavy mandeha ny fandriampahalemana"Nisarika ny saina ho amin'ny gadona tsonga izy mikasika ny dikan'io hetsika io tamin'iny andro iny ary nanome ny gorodona an'i Rafael de la Rubia: "… Aorian'ny 159 andro manakaiky eto amin'ity Diary faha-2 ity ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana.
Tamin'ity vanim-potoana ity dia nanao hetsika tany amin'ny firenena 50 sy tanàna maherin'ny 200 ny MM ary nanana ekipa fototra, ka misy maro ankehitriny, izay nivezivezy ny planeta ... Io fitaomana io dia aingam-panahy avy amin'ny ray aman-dreny ny tsy fifandeferana iza no nialoha antsika, izay nohajainay teny an-dalana: M. Gandhi ao amin'ny Sevagram Ashram (India) ary Silo ao amin'ny Punta de Vacas Park (Argentina), anelanelan'ny hafa… ”. Rehefa avy nisaotra ireo mpandray anjara izy dia nanasa ny rehetra handray anjara amin'ny tetikasan'ny ¡¡¡3 martsa !!! 5 taona manomboka izao, taona 2024.
Encarna S. nataon'i Fikambanan'ny Vehivavy maha-olombelona ho an'ny tsy fanoloran-tena, nanao fitalahoana ho tombontsoa amin'ny andraikitry ny vehivavy ho amin'ny tontolo tsy misy herisetra. “Io no fotoana hifohazan'ny vehivavy, tompon'ny hevi-tsika ary manolo-tena amin'ny fiainana. Izahay dia manambara fa tandindomin-doza ny fiainana, atahorana ny olombelona, ​​ary adidintsika ny fiarovana azy. Manomboka anio dia manasa ny fanoloran-tena ho amin'ny fiarovana ny aina, hanorina fifandraisana, mamorona tambajotra: tambajotra firaisan-kina, fikarakarana, tambajotra olombelona avy amin'ny vehivavy. Noho izany dia afaka miverina amin'ny hevitry ny karazam-biby isika, ilay firaketana fa iray ny olona rehetra »
Taorian'ny choreograma efa namboarina taloha dia niditra tamin'ny andalana roa tamin'ny andry roa ny vondrona roa ary nifindra teo amin'ny tsipika nidina teo amin'ny tany mandra-fanamafisana ny famantarana ny Nonviolence. Tamin'ny marika nifanekena dia namboarina ny baoritra fotsy sy volomparasy, ary nanambara fa, avy amin'ny afovoany volomparasy, dia nanaparitaka ny tsy fahatomombanana tamin'ny vehivavy fotsy ny vehivavy. Avy amin'ireo sary etsy ambony dia voarakitra ho fitadidiana ny hetsika. Niainga taorian'ny faribolana, nizara fifaliana tamin'ny mpijery ny mpandray anjara.
Taty aoriana, nikatona tamin'ny fomba 148 0 km ny volana martsa. mivezivezy amin'ny planeta ao amin'ny Km mitovy amin'ny toerana nandaozany azy 159 andro lasa izay.
Ny tolakandro dia nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana iraisana 2M ny mpikatroka tamin'ny MM 8.
Andro roa feno sy henjana ny fihomehezana eo amin'ny olona avy amin'ny firenena sy kolontsaina samihafa, vonona ny hanohy hiara-miasa amin'ny ho avy. Porofon'izany, ny ampitson'io dia efa natao tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana mba hamelabelarana ny tetikasan'ny Diabe amerikanina latina ho an'ny tsy fanoloran-tena ary ny fampielezan-kevitra Ranomasimbe Mediterane ...
soratra: Martine SICARD avy amin'izao tontolo izao tsy misy ady ary tsy misy herisetra
sary: Pepi sy Juan-Carlos ary, Deepak, Saida, Vanessa, ...